Muuqaal Qurux Badan Oo Gudbinayay Fariin Ka Turjumaysa Isku Duubni Wada Jira Oo Qaranka S/land Ku Soo Caano-maalay | Marsa News
Muuqaal Qurux Badan Oo Gudbinayay Fariin Ka Turjumaysa Isku Duubni Wada Jira Oo Qaranka S/land Ku Soo Caano-maalay
April 12, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Wakhti laga joogo maalmo kooban waxa fagaare si wada jira bulshada ugala hadlay madaxda qaranka somaliland oo fagaare iyo goob bilan si qurux badan uga soo muuqday, iyagoo gudbinayay fariin ka turjumaysa wada jirka iyo isku duubnida reer somaliland.
Madaxwaynha iyo madaxda xisbiyada qaranka iyo waliba golayaasha sharci dajinta ayaa si wadar ah umada ugu guubaabiyay marka hore inay ahaadan dad ka taxadira oo ka foojignaada cudurkan dunida aafeeyay ee corona-virus, intaa kadib waxa ay halkaa masuuliyiinta qaranka somaliland ee wakiilka ka ah bulshadu ay shacbigooda la wadaageen in somaliland ay tahay qaran madax banaan oo aan jiritaankiisu gorgortan gali karin.
Muuqalka guud ee fagaaraha ay sida wada-jirka ah u taagnaayeen waxa uu ahaa aqalka dalka looga arimiyo ee madaxtooyada, halkaas oo madaxwayne biixi ku soo maamuusay islamarkaana ay shacbigooda uga wada gudbinayeen fariimaha ka turjumaya iskaashiga iyo isku duubnaanta reer somaliland inay tahay midka lagu soo gaadhay halkaa, mudan tahayna in markasta iyo xaalkasta oo jirtaba sidaasi laysugu duubnaan doono oo shacbiga iyo madaxdiisuba yihiin mid qudhaata.
Waxa si siman u wada taagna madaxwaynaha jamuuriyada somaliland iyo labada gudoomiye ee xisbiyada mucaaridka iyo waliba labada gudoomiye ee golayaasha wakiilada iyo guurtida oo laysku yidhaa baarlamaan.
Muuqalka sawirka madashaasi ayaa ahaa mid fariin culus gudbinaya astaana u ahaa sida ay shacbiga iyo madaxdooduba uga midaysan yihiin xaalad kasta iyo waliba goorkasta oo arini jirto, islamarkaana uu muuqalkaasi noqday mid in badan oo cadawga somaliland ah ka nixiyay haba ugu horeeyaan maamulka farmaajo’e.